1. Emulator xidhiidha barnaamijyada kala duwan
2. Emulator u Game consoles'ka
Madaxweyne Siilaanyo Oo Emulator
3. Ilaha Emulator
Top emulator 11 PC for Android
Emulator ayaa android waa barnaamij software in emulates nidaamka qalliinka android casriga ah. Emulators Kuwan waxaa inta badan loo baahan yahay socda Chine android iyo ciyaaraha kombuutarka. Software Tani marka aad desktop kuu ogolaanayaa inaad isku dayaan in ay ka soo codsiyada in la sameeyo nidaamka qalliinka android.
Habkan, aad yeelato software oo markaas waa inaad tijaabin kartaa la emulator ka android on your computer. Tani waxay kaa caawin karaan in aad shaqayso baxay wax cayayaanka software ah waxaa laga yaabaa in ka hor inta aanad bixin codsiga for sale in suuqa android. Si kastaba ha ahaatee, doorashada emulator saxda ah android noqdaan hawl mashquulsan sidii haddii aan si sax ah loo doortay, runtii hakin kartaa hoos your computer.
Sababaha dega Khayaadka oo kala duwan si weyn ku xiran user ah, inta badan injineerada adeeg ama horumarinta waxaa laga yaabaa inay isticmaalaan sida madal imtixaan, ama isticmaala caadiga ah waxaa laga yaabaa in la soo gudboonaado oo kale lagama maarmaan ah. In this article, waxaan doonayaa in aan diiradda saaraan xalka ugu wanaagsan ee software xaasidnimo android aad pc. Oo dhan emulators hoos ku wada hadleen ordi codsiyada android iyo kulan on your computer daaqadaha, bixiyaan waxqabadka sare oo aad si fudud u soo dajiyo.
11 PC EMULATORS ee Android
1.Andy emulator ka android
Emulator Tani waa cusub suuqa iyo ka duwan barnaamijyada kale oo si fudud u bilawday codsiga android, waxaa sida caadiga ah ku siinaya android si buuxda u shaqaysa daaqadaha ama nidaamka Mac ah oo la beehsa karaa aalad jira android aad. Isticmaalka emulator tan, waxaad booqan kartaa dukaanka play ah, android ordo, rakibi iyo maamusho codsiyada iyo qaar badan.
Qaybinta this emulator android ka mid ah VirtualBox, Andy ciyaaryahanka iyo image ah ee Android 4.2.2. Waxa ay u ogolaataa download barnaamijyada si toos ah sida suuqa pre-ciyaar. Hawlaha kale ee emulator waxaa ka mid ah gurmad iyo xataa waxaad u isticmaali kartaa si aad casriga ah sida qofka xukuma ah ee Andy.
Geedi socodka ARM Support ie socda emulator on shabakad
Download link: http://android-emulator.joydownload.com/
2.Blue xidhmooyinka u Android
Blue xidhmooyinka malaha waa ikhtiyaarka ugu caansan ee dega Khayaadka oo android adduunka. Waxaa inta badan loo isticmaalo bilaabay kulan android iyo codsiyada ee your computer. Blue xidhmooyinka sidoo kale u ogolaataa user ay u ordaan files apk ka pc ah. Waa mid aad u fudud in la rakibo iyo sida loo isticmaalo sida waxay u baahan tahay ma set oo dheeraad ah oo OS iyo Brasil uga Dev, in qasabno dhowr ah oo aad ka heli kartaa waxa lagu rakibay on your computer. Marka aad u ordaan, waxaad awoodi doontaa inaad si degdeg ah u helaan dhammaan dalabyada android.
Easy si loo soo dajiyo iyo isticmaalka
Genymotion waa mid ka mid ah emulators android ugu dhaqsaha badan oo ka mid ah sawirada kartoo Android (x86 hardware OpenGL dardargalinta) oo u san yahay codsiyada imtixaanka. Mashruuca waxa loo sameeyay ka mid ah jirka AndroidVM iyo marka la barbar dhigo, Genymotion ayaa naqshad cusub oo ka mid ah ciyaaryahanka, rakibayo iyo qaababka badan. Genymotion waa barnaamij madal cross laakiin waxay u baahan tahay VirtualBox.
Waxaa emulates xiriir Wi-Fi, camera hore iyo xagga dambe, function screencast iyo hago in version ganacsi.
Sidoo kale loo yaqaan WindowsAndroid.It waa barnaamij keliya ee awood u ordaya Android 4.0 hoos daaqadaha oo aan wax hardware dheeraad ah ama software. Barnaamijkan wuxuu kuu ogolaanayaa inaad la codsiyada android shaqeeyaan, xamili karo codsiyada ka codsiyada non-hooyo ee hardware ee pc iyo sidoo kale hawshooda waddaa Dalvic ee mashiinka dalwaddii. WindRoid waa si dhakhso ah howlgalka, waxa uu leeyahay dhinacyo badan oo wanaagsan oo ay gabi ahaanba bilaash ah.
YouWave waa codsi daaqado kuu ogolaanaya inaad si ay u soo bixi oo ay maamulaan codsiyada Android aan haysan si ay dhibaato ku duuban SDK ee Android oo Sun SDK. Emulator waxa ku jira mashiin dalwaddii oo ku rakibtay ka Android qaybinta in kaliya mouse click ah. Marka lagu rakibay, barnaamijka ordi karaan codsiyada Android ka drive ee xaafaddaada ama iyaga geliyaan ka ilaha bilaashka ah ee codsiyada Android internetka.
Taageerada Android 2.3 Gingerbread
Barnaamijku waxa uu yahay mid aad u culus oo ku saabsan isticmaalka khayraadka computer oo u qabata si tartiib ah ku kumbiyuutarada ka weyn.
Android SDK ma aha barnaamijka oo kaliya ah, laakiin xirmo qalabka loogu talagalay horumarinta. In madal tan, waxaad samayn kartaa barnaamij oo aad u debugging. Waxaa si gaar ah abuuray dadka ah ee codsiyada Android madal mobile. SDK Tani waxay ku siinaysaa jawi isku-dhafan ee horumarka sida waxa ku jira dhisay qalabka sameeysa Android loo baahan yahay in la dhiso imtixaanka iyo Debug, barnaamijyadooda u Android aad madal daaqadaha. SDK Android waa software keliya ee waxaa lagu taageeray laguna horumariyo by Google waana barnaamij hoggaamineed.
Waa madfac buuxa barnaamijka oo aad abuuri karaan oo tijaabo ah oo aad codsiga u gaar ah.
Too buux raagay ee shaqada
Waxay leedahay wax badan oo aan loo baahnayn muuqaalada u isticmaala celcelis ahaan.
Droid4X waa emulator cusub oo laga yaabo in ugu xiisaha badan oo loogu talagalay awooda dhabta ah ee uu gacmihiisa ku user iyo qaababka ay waaweyn yihiin sidoo kale. Waxay leedahay qaar ka mid ah muuqaalada socodyada sida ay timaado pre-rujin, iyadoo dukaanka play rakibay.
Waa quruxsan degdeg ah
Waxay kuu ogolaanaysaa inaad reserved aad keyboard sida qofka xukuma ah emulator ah.
Download link: Guji halkan kala soo bixi Droid4X Android Qabille oo u Windows 7/8 / 8.1 / 10
AndyRoid waa emulator ah in uu yahay mid ka mid ah noociisa ah ee daaqadaha 7/8 & 10. Waxa uu leeyahay muuqaalada gaar gaar ah oo aan la taageeray by emulator kasta oo kale oo halkaas sida la siiyo user ee awood u leh inay isticmaalaan telefoonka sidii hago halka ciyaaro . Waxaa kale oo ay leedahay taageero ARM kaas oo u ogolaanaya user si toos ah loo soo dajiyo Chine ee emulator Andy iyada oo aad desktop martida loo siiyaa biraawsarkaaga.
Download link: Guji halkan kala soo bixi Andyroid -Andy OS emulator daaqado 7/8 / 8.1 / 10
9.Xamarin Android Player
Ciyaaryahanka Xamarin Android waa mid ka mid ah emulator ugu kahdo android. Inkasta oo ay caan ah oo ka yar, waxa uu siiyaa waayo-aragnimo ugu dambeeyay android aad PC / MAC lacag la'aan ah. Iyadoo la soo saaray shirkadda barnaamijyo wacyi ah, waa ku dhawaad ​​bugles. Si kastaba ha ahaatee, sida Genymotion iyo Andy OS Xamarin u baahan xiran Box Virtual.
Download link: Riix halkan si aad kala soo bixi Xamarin Android Player for Windows 7/8 / 8.1 / 10 (64-bit)
10.DuOS-M Android Emulator
DuOS bixiyaan khibrad android buuxda oo ku saabsan PC la taageero xiriiri multi, noqanayaa Mozilla iwm sidaas loo sahlayo waayo-aragnimo ciyaaraha ah. Waxa kale oo ay bixisaa GPS, waafaqid codsi oo aad u fududahay in la isticmaalo. Waxa kale oo ay bixisaa tijaabo ah oo bil oo lacag la'aan ah.
Riix halkan si aad Download DuOS-M Android Emulator for Windows 7/8 / 8.1 / 10 (64-bit)
Riix halkan si aad Download DuOS-M for Windows 7/8 / 8.1 / 10 (32-bit)
Sida magacaba ka muuqata, emulator taasi si weyn filaayo in nidaamka Windows. Waa sahlan tahay si loo soo dajiyo iyo xaqiiqda ah in waddaa on eey daaqadaha hubisaa in emulator waa deg deg ah oo aanu sudhay dhexe. Emulator ayaa sidoo kale taageerayaa isticmaalka telefoonada gacanta sida ilaaliyaal kulamada. UI ayaa si weyn filaayo in isticmaalka PC iyo waxa ay leedahay mid ka mid ah screens guriga ugu fiican.
Download link: https://www.maketecheasier.com/android-desktop-emulator/
Emulator android Android
Duos-M Android Emulator
Price Free Free Free Free $19.99 Free Free $ 25 / mnth Free
Phone sida maamusha NO HAA HAA NO HAA HAA HAA NO HAA
Taageerada Horumarinta HAA HAA HAA HAA HAA NO NO HAA HAA
Integration Camera HAA HAA HAA NO HAA NO NO NO HAA
Riix Notifications HAA NO NO NO NO NO HAA NO HAA
Top 20 Android Bluetooth Games in hab multiplayer
Top 15 kulan android xiiso leh inaan la ciyaaro saaxiibo
Maxaad Ma rabtaa in aad muraayad Your Android inay TV?
25 Great Games in lagu ciyaari karo iyada oo Emulators on Android
Best Game tacsiyeeyaan Emulators ayaa ku Mac OS
Best 20 New Bixiyay Android Games Waa in aad isku daydo
Top 10 Pokemon Games u Android
Top 10 Football Games u Android Users
> Resource > Emulator > Top emulator 11 PC for Android